Ciid Mubaarak Ciid Farxad iyo raynrayn leh kuwada Ciida |
Magaalada Jigjiga ayaa caawa dadku ku badan yihiin suuqa iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaaddaan iyadoo sidoo kale meelaha haweenku timaha ku hagaajistaan iyadana lagu badan yahay, Caruurta ayaa caawa aad isugu soo baxay meelaha xaafadaha iyo suuqa iyadoo islaan kasta ay ilmaheeda gacanta hayso si bal dharkii ciidda ay ugu gado ee ay maalmahan ka habsaantay.
Masaajidda ayaa caawa takbiirta ciiddu ka socotaa, iyadoo dadkuna isku qaabilayan waji furan oo ay farxadi ku dheehan tahay, Ciid Mubaarak macal ciidayn waa erayada caawa dadka ree Jigjiga ay is dhaafsanayaan.
Magaalada ayaa sidoo kale aad u quruxoon caawa iyadoo laydhadh kala duwan lagu xidhay dhammaan waddooyinka waaweyn ee magaalada iyo waliba sharaxaado kale oo aad kuu soo jiidanaya markaad caawa dhex marayso magaalada, iyadoo sidoo kale qoraallo ciidda ku saabsan ay ku dhajisan yihiin gidaarada magaalada iyo waliba maryo ay ku qoran yihiin erayo iyo hal ku dhagyo ciidda loogu talagalay.
Si kastaba ahaatee Salaadda Ciidda ee barito ayaa sida la qorsheeyay lagu tukan doonaa banaanka weyn ee ku dhex yaal xerada kililka dhexdiisa, iyadoo salaaddaas ka sokow dadka shacabka ah ay imaan doonaan madaxda ugu saraysa DDS, Madaxda UWSLF iyo garabka nabadda qaatay ee ONLF.
Shabakadda NogobNews ayaa idiinka ballan qaadaysa in maalinta barri ah ay toos idinku soo gudbin doonta wararka ciidda ku saabsan iyadoo sidoo kale magaalooyinka Dhagaxbuur, Fiiq, Harar ay Wariyayaasha Shabakaddu ka soo tabin doonaan wararka Ciidda.
Wixii ka soo kordha diyaargarwga Ciidda gaar ahaan degmooyinka kala soco